डाक्टरले नै दुई छोराछोरी र श्रीमती मा’रे, निन्द्राको औषधी खाएर आफु पनि नदिमा हाम फाले ! – List Khabar
Home / समाचार / डाक्टरले नै दुई छोराछोरी र श्रीमती मा’रे, निन्द्राको औषधी खाएर आफु पनि नदिमा हाम फाले !
डाक्टरले नै दुई छोराछोरी र श्रीमती मा’रे, निन्द्राको औषधी खाएर आफु पनि नदिमा हाम फाले !
admin December 13, 2021 समाचार Leaveacomment 81 Views
काठमाडौ । केही दिन अघि कोभिडको ड र ले डाक्टरले आफ्नो परिवार नै सकेको समाचार सार्वनिक भएको थियो । भारत कानपुरमा श्रीमती र दुई छोराछोरीलाई मृत्यु दिने डाक्टर सुशील कुमारले पहिले निद्राको च क्की खाए र त्यसपछि गंगामा हाम फालेको रहस्य खुलेको छ ।
सायद उसले सजिलै म र्न सकोस् भनेर यस्तो गरेको हुनसक्छ । निद्राको च क्की बरामद भएकाले प्रहरीले यस्तो आशंका गरेको छ । प्रहरीले श्रीमती र छोराछोरीको शव नजिकै चियाको खाली कप फेला पारेको थियो ।
साथै, भान्सामा केही पाउडर फेला परेको थियो। फरेन्सिक अनुसन्धानले चियामा पाउडर मिसाएर तीनै जनालाई दिएको पुष्टि भएको छ । ताकि ऊनीहरु बे हो श हुन्। सुशीलको ज्याकेटबाट औषधी फेला परेको देखेर सुशीलले ती औषधी श्रीमती र छोराछोरीलाई पि सेर दिएको हुन सक्ने प्रहरीको आशंका छ ।
गंगामा दश दिनसम्म खोजी अभियान
उनको मोबाइलको अन्तिम लोकेशन सरसैया नदि किनार देखाएको थियो । त्यसयता प्रहरीले लगातार गंगामा खोजी अभियान चलाएको थियो । डीसीपी पश्चिम बीबीजीटीएस मूर्तिको नेतृत्वमा पानी प्रहरी र गोताखोरहरूको टोलीले दिउँसो करिब १२ बजे गंगाको बीचमा शव फेला पारे । उसको ज्याकेट र प्यान्टको खल्तीमा खोजी गर्दा सबै कागजात फेला परेको थियो । जसका कारण सुशीलको शव पुष्टि भएको हो ।
Previous भोली बाट विद्यालय बन्द हुने मन्त्रालयले भर्खरै जारी गर्यो यस्तो सुचना एक पटक पढ्नै पर्ने
Next भारतकी हरनाज संधूले जितिन् मिस युनिभर्सको उपाधि, २१ वर्षपछि दोहोर्याइन् इतिहास